မကြာခင် အသစ် မိတ်ဆက်မယ့် Vivo S စီးရီးဖုန်းအသစ် "Vivo S1"
By Nigma 13 July 2019
Vivo က S စီးရီးအသစ်ရဲ့ ပထမဆုံးဖုန်းဖြစ်တဲ့ “Vivo S1” ကို အိန္ဒိယ၊ မြန်မာနဲ့ အင်ဒိုနီးရှား ဈေးကွက်တွေမှာ မကြာခင် ရက်ပိုင်းအတွင်း မိတ်ဆက်ပေးတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အခု အသစ်ထွက်လာတဲ့ Vivo S1 ဖုန်းဟာ ယခုနှစ်အစောပိုင်းတုန်းက တရုတ်နိုင်ငံမှာ မိတ်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ “Vivo S1” နဲ့ လုံးဝ မတူပါဘူး။ ဒီဇိုင်းကော အချက်အလက်ကော ကွာပါတယ်။ တရုတ်မှာ မိတ်ဆက်ခဲ့တဲ့ S1 က Vivo V15 ကိုပဲ နာမည်ပြောင်း ထုတ်ထားတာပါ။ အိန္ဒိယနဲ့ မြန်မာ ဈေးကွက်တွေမှာ ရောင်းမယ့် S1 ကတော့ လုံးဝ အသစ် ဖြစ်ပါတယ်။
Vivo Indonesia ရဲ့ Twitter စာမျက်နှာမှာ တင်ထားတဲ့ အမြည်းဓာတ်ပုံတွေအရ Viv S1 ဖုန်းမှာ ရေစက်ပုံစံ Notch နဲ့ AMOLED မျက်နှာပြင်၊ မျက်နှာပြင်အောက် လက်ဗွေရာဆန်ဆာနဲ့ ကျောကင်မရာ ၃ လုံးတို့ ပါဝင်လာတာ တွေ့ရပါတယ်။
Takeapeek at our BIG NEWS‼
A couple of days left until you can see the secret we’ve been keeping!
32MP AI Selfie with Screen Touch ID on #vivoS1 is gonna beablast! 📸😍 #UnlockYourStyle pic.twitter.com/J6tTygCund
V15 ဖုန်းတုန်းက မော်တာတပ် Pop-up ရှေ့ကင်မရာ ဒီဇိုင်းကို သုံးခဲ့ပေမယ့် အခု S1 မှာတော့ ရေစက်ပုံစံ Notch ဒီဇိုင်းကိုပဲ ပြောင်းလဲ အသုံးပြုထားပါတယ်။ Notch အတွင်းမှာ AI လုပ်ဆောင်ချက်အပြည့်နဲ့ 32MP ရှေ့ကင်မရာ ၁ လုံးကို ထည့်ပေးထားပါတယ်။ Lake Blue နဲ့ Pet Pink ဆိုပြီး အရောင်ပြေး ဒီဇိုင်းအသစ်နဲ့ မော်ဒယ် ၂ မျိုး ထုတ်သွားမှာပါ။
Vivo S1 မှာ MediaTek ရဲ့ Octa-core Helio P65 Chipset အသစ်ကို အသုံးပြုသွားမယ်လို့ သိရပါတယ်။ Helio P65 ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ဇွန်လကမှ မိတ်ဆက်ခဲ့တဲ့ MediaTek Chipset အသစ် ဖြစ်ပါတယ်။ Vivo S1 က ဒီ Chipset နဲ့ ထွက်လာတဲ့ ကမ္ဘာ့ပထမဆုံးဖုန်း ဖြစ်လာမှာပါ။ Helio P65 ဟာ Vivo V15 မှာ သုံးခဲ့တဲ့ Helio P70 ထက် စွမ်းဆောင်ရည် ပိုမြင့်ပါတယ်။ ဂိမ်းစွမ်းဆောင်ရည် ပိုကောင်းစေဖို့အတွက် Game Turbo Mode လည်း ပါဝင်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
FullHD+ ရုပ်ထွက် အရည်အသွေးရှိတဲ့ ၆ ဒဿမ ၅၃ လက်မအရွယ် AMOLED Display နဲ့ ဖြစ်ပြီး၊ လက်ဗွေရာဆန်ဆာကို မျက်နှာပြင်အောက်မှာ ထည့်သွင်းထားပါတယ်။ 6GB RAM+128GB ဗားရှင်းနဲ့ 8GB RAM+ 128GB ဗားရှင်းဆိုပြီး ၂ မျိုး ထုတ်သွားဖို့ ရှိပါတယ်။
ကျောကင်မရာကတော့ ၃ လုံးတွဲပါ။ 16MP အဓိကကင်မရာ၊ 8MP မြင်ကွင်းကျယ်ကင်မရာ နဲ့ 2MP Depth Sensor တို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျောကင်မရာရဲ့ AI လုပ်ဆောင်ချက်တွေလည်း အဆင့်မြှင့်တင်ပေးထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။ Vivo S1 မှာ 4,500mAh ဘက်ထရီကြီးကြီး အပြင်၊ Dual Engine အားအမြန်သွင်းစနစ်လည်း ပါဝင်ပါတယ်။ ဘက်ထရီ အသုံးခံသလို အားပြန်သွင်းချင်ရင်လည်း ခဏလေးနဲ့ သွင်းနိုင်မှာပါ။
Vivo S1 ရဲ့ ဈေးနှုန်းကိုတော့ တရားဝင် မကြေညာရသေးပါဘူး။ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာတော့ ဇူလိုင်လ ၁၆ ရက်နေ့မှာ မိတ်ဆက်ပေးသွားဖို့ ရှိပြီး မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း မကြာခင် မြင်တွေ့ရဖို့ ရှိနေပါတယ်။ ဈေးနှုန်းအားဖြင့် မြန်မာငွေ ကျပ် ၄ သိန်းဝန်းကျင် ရှိမယ်လို့ ခန့်မှန်းရပါတယ်။
Ref: Gadgets House, Vivo Indonesia
Vivo ရဲ့ Gaming ဖုန်းအသစ် “iQoo Neo” ထွက်ရှိ
Topics: Vivo S စီးရီး, Vivo S1, စမတ်ဖုန်း